नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिकरुपमा विभाजित भइसकेको छ। ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभाजित नेकपामा कुन समूह आधिकारिक भन्ने निर्क्याैल भएको छैन। दुबै समूहले आफ्नै समूह आधिकारिक हुने र ‘सूर्य’ चिन्ह आफ्नै हुने दाबी गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्नेफैसला सुनाएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमाथि शंका प्रकट गरिरहेको छ। आधिकारिता विवाद निरुपण गर्न आग्रह गर्दा आयोगले निर्णय दिन नसकेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले आयोगलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रश्न पनि गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग के गर्दैछ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त?’
‘अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न हुन्।’
निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनसम्मत ढङ्गले सहज निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न उठेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। यद्यपि आफूहरुले अहिले नै त्यसरी नसोच्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं।’
प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिसमेत तय भइसकेकाले आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘अन्यथा निर्वाचन आयोगसमेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाइ राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ,’ उनले लेखेका छन्।
#नेपाल_कम्युनिष्ट_पार्टी #निर्वाचन_आयोग #नारायाणकाजी_श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १५, २०७७ १८:१७